လူတှသေိပျမသိသေးတဲ့ အဖြားရဲ့ လှို့ဝှကျခကျြမြား? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူတှသေိပျမသိသေးတဲ့ အဖြားရဲ့ လှို့ဝှကျခကျြမြား?
? အဖြားဆိုတာဘာလဲ ??
‘အရငျး’ရဲ့ အပျေါဘကျထိပျ လို့တော့ စကားကပျမပွောကွေးပေါ့။ အဖြားဆိုတာ လူတိုငျးဖွဈဖူးတဲ့ ဝဒေနာ တဈမြိုးပါ။ Fever လို့ ချေါသလို Febrile illness လို့လညျးချေါတယျ။ Pyrexia လို့လညျး ချေါပွီး Controlled Hyperthermia လို့လညျး ချေါပါတယျ။
ကိုယျပူခြိနျတကျလာရငျ ဖြားပွီလို့ လူတှေ ပွောတတျကွသလို နမေကောငျးဖွဈနပွေီလို့လညျး ယူဆတတျကွတယျ။
? ကိုယျပူတိုငျး ဖြားတာလား ??
ဖြားတိုငျး ကိုယျပူလရှေိ့ပမေဲ့ လကျနဲ့စမျးကွညျ့လို့ ကိုယျပူနတေိုငျးတော့ အဖြားမဟုတျပါဘူး။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပူခြိနျက အစားအသောကျ၊ ပတျဝနျးကငျြအပူခြိနျ၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု စတာတှအေပျေါမူတညျပွီး တသမတျတညျးမဟုတျဘဲ ပွောငျးလဲနတေတျပါတယျ။ ညနေ ၆နာရီ ဝနျးကငျြမှာ အပူဆုံးဖွဈတတျပွီး မနကျ ၃နာရီ ဝနျးကငျြမှာ အအေးဆုံးဖွဈတတျပါတယျ။
? အပူခြိနျဘယျလောကျဆို ဖြားတာလို့ ချေါမလဲ ??
လူတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံမှနျအပူခြိနျဖွဈတဲ့ 36–37° C (98–100° F)အထကျကို ကြျောသှားပွီဆို ဖြားတယျလို့ ဆိုရပါမယျ။
? ဘာနဲ့တိုငျးလဲ ??
ဒါတော့ လူတိုငျးသိပွီးသားပါ။ သာမိုမီတာနဲ့ တိုငျးရပါတယျ။ ဟိုးတုနျးကတော့ လြှာအောကျထညျ့တိုငျး..ခြိုငျးအောကျမှာတိုငျးတဲ့ သိပျကွညျ့ရမလှယျတဲ့ ပွဒါးတိုငျဆိုတဲ့ စိတျညဈစရာ သာမိုမီတာတှပေေါ့။ အခုတော့ digital ဂဏနျးတှနေဲ့ ပွတဲ့ သာမိုမီတာတှရှေိလာသလို အသားကိုထိစရာမလိုတဲ့ အနီအောကျရောငျခွညျသုံး သာမိုမီတာတှပေါ ရှိနပေါပွီ။
ခြိုငျးမှာတိုငျးရငျတော့ ပကတိအပူခြိနျထကျ နညျးတာမို့ 0.2 – 0.3 ° C ထပျပေါငျးပွီးတှကျရပါတယျ။
? ဘာကွောငျ့ဖြားတတျလဲ ??
မြားသောအားဖွငျ့တော့ Virus ၊ Bacteria ၊ Fungi ၊ Protozoa စတဲ့ ရောဂါပိုးပေါငျးစုံထဲက တဈခုခု.. လမျးကွောငျးတဈခုခုကနေ ခန်ဓာကိုယျထဲ အလညျအပတျရောကျလာပွီဆို ကိုယျပူတကျပွီး ဖြားလာတတျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကာကှယျဆေးတှထေိုးပွီးတဲ့အခါမှာလညျး ဖြားတတျပါသေးတယျ။
တခြို့ဆေးတှကွေောငျ့လညျး ကိုယျပူခြိနျတကျလာတတျသလို Amphetamine လို စိတျကွှဆေးတှကွေောငျ့လညျး ကိုယျပူတတျပါတယျ။ အရကျဖွတျတဲ့ အခါမှာလညျး ကိုယျပူတကျနတေတျပါတယျ။
ဖြားနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးပေါငျး မွောကျမြားစှာရှိသလို ဘာကွောငျ့ဆိုတာ လုံးဝအကွောငျးရငျးရှာမရတဲ့ Pyrexia of Unknown Origin (PUO) ဆိုတဲ့ ဆရာဝနျကို ကြီစယျစိနျချေါပွီး လူနာကို အကွာကွီးဒုက်ခပေးနတေဲ့ ရောဂါအခွအေနမြေိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
? ဖြားရငျ ဘာလက်ခဏာတှေ ပွတတျလဲ ??
ကိုယျပူပါမယျ။ တခြို့ ရောဂါတှမှော ခမျြး/တုနျ နတေတျပါတယျ။ အဖြားစတကျတဲ့ အခြိနျနဲ့ ဘယျလိုဖြားတယျဆိုတာကို သခြောသတိပွု မှတျထားပွီး ဆရာဝနျကိုပွောဖို့လိုပါတယျ။ ရောဂါတဈခုနဲ့ တဈခု ဖြားတဲ့ပုံစံခငျြးကှာတတျပါတယျ။
အူရောငျငနျးဖြားလို Relative Bradycardia လို့ချေါတဲ့ ရှားရှားပါးပါး နှလုံးခုနျနှေးနစေတေတျတဲ့ ရောဂါမြိုးကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ အဖြားတှမှော နှလုံးခုနျမွနျတတျပါတယျ။
ကိုကျခဲ..ညောငျးညာ..မလှုပျခငျြ ဖွဈတတျသလို..ခေါငျးကိုကျနတေတျပါတယျ။ အစားအသောကျလညျးပကျြတတျပါတယျ။ တုပျကှေးလို အခွအေနမြေိုးမှာ နှာစေး..ခြောငျးဆိုး..ဝမျးလြှော..စတာတှေ တှဲဖွဈတတျပါတယျ။ ကနျြတဲ့ ရောဂါပိုးတှမှောလညျး ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဘယျအစိတျအပိုငျးကို ထိခိုကျတယျဆိုတာမူတညျပွီး တခွားလက်ခဏာတှပွေနတေတျပါတယျ။
ဒီလက်ခဏာတှရေယျ ဘာတှခေံစားရတယျဆိုတဲ့ ဝဒေနာတှရေယျကို ကွညျ့ပွီးမှ စမျးသပျစဈဆေး..လိုအပျရငျ ဓာတျခှဲခနျးအဖွတှေေ…ဓာတျမှနျအဖွတှေအေကူအညီနဲ့ ရောဂါအဖွထေုတျကုသရတာမို့ ဆရာဝနျကို အားလုံး မခွှငျးမခနျြ ပွောပွဖို့ လိုပါတယျ။
မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ ခဈြစရာစရိုကျတှထေဲက အားနာတတျတဲ့ ဓလကေ့ ဆေးရုံဆေးခနျးတှဆေီကို ပါလာတဲ့အခါ ဖွဈသမြှ အားလုံးတခါတညျးမပွောဘဲ နောကျတဈခါပွမှ ခှဲပွော တတျတဲ့ လူနာမြိုးတှေ တှဖေူ့းတာမို့ပါ။
? ဖြားတာ ဘာကောငျးလဲ ??
ဘာမှမကောငျးဘူးလို့တော့ မပွောပါနဲ့ဦး။ တကယျတော့ ကိုယျပူနတော ဖြားနတောဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကိုယျခံအားစနဈနဲ့ ရောဂါပိုးမှားတှေ တိုကျခိုကျနတေဲ့ တိုကျပှဲရဲ့ စဈခြီတေးသံတှလေို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရရာလကျနကျစှဲကိုငျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ Immune System ဆိုတဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သကျစောငျ့တပျသားလေးတှရေဲ့ အောငျပှဲအပူရှိနျကို ဗှမေယူသငျ့ပါဘူး။
ရောဂါပိုးတှဝေငျလာတာကသာ မကောငျးလို့ ကာကှယျဖို့လိုတာပါ။
? ဒါဆို ရောဂါပိုးတှကေို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ??
– ကာကှယျဆေးတှအေားလုံး မပကျြမကှကျထိုးပါ
– အန်တရာယျရှိတဲ့ အကာအကှယျမဲ့တဲ့ လိငျဆကျဆံမှုတှကေိုရှောငျပါ
– မကွာခဏ လကျဆေးပါ
– အစာအာဟာရ ပွညျ့ဝမြှတစှာစားပါ
– လူထူထပျတဲ့ နရောတှရှေောငျပါ
? ဖြားရငျ ဘာလုပျရမလဲ ??
ကိုယျခံအားစနဈရဲ့ ပုံမှနျလုပျဆောငျခကျြတဈခုဖွဈလို့ ကိုယျနညျးနညျးပူနရေုံနဲ့တော့ ဆေးတှသေောကျဖို့ မလိုသေးပါဘူး။ ?ကိုယျပူတာအပွငျ ကိုကျခဲနာကငျြတာတှေ၊ ခေါငျးကိုကျ အကွောတကျတာတှေ၊ ညောငျးညာတာတှဖွေဈလာရငျတော့ Paracetamol(ပါရာစီတမောလျ) ကို ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြမပါဘဲ သောကျထားလို့ရပါတယျ။ တျောရုံတနျရုံ အဖြားအနာတော့ လှငျ့သှားမှာပါ။ လိုတာထကျတော့ ပိုမသောကျပါနဲ့။
– ဆေးလိပျ၊ အရကျ၊ ဘီယာ၊ ကှမျး ရှောငျဖို့
– အိပျရေးဝအောငျ အိပျဖို့
ရမြေားမြားသောကျပွီး ရဓောတျပွညျ့ဝအောငျ ဖွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
ဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျဆီသှားဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
အထူးသဖွငျ့ ကလေးငယျတှနေဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှဆေိုရငျတော့ စောစောစီးစီး ကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ..။
အားလုံး အဖြားအနာ ကငျးကွပါစေ..။
?လူတွေသိပ်မသိသေးတဲ့ အဖျားရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်များ?
? အဖျားဆိုတာဘာလဲ ??
‘အရင်း’ရဲ့ အပေါ်ဘက်ထိပ် လို့တော့ စကားကပ်မပြောကြေးပေါ့။ အဖျားဆိုတာ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ဝေဒနာ တစ်မျိုးပါ။ Fever လို့ ခေါ်သလို Febrile illness လို့လည်းခေါ်တယ်။ Pyrexia လို့လည်း ခေါ်ပြီး Controlled Hyperthermia လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပူချိန်တက်လာရင် ဖျားပြီလို့ လူတွေ ပြောတတ်ကြသလို နေမကောင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်း ယူဆတတ်ကြတယ်။
? ကိုယ်ပူတိုင်း ဖျားတာလား ??
ဖျားတိုင်း ကိုယ်ပူလေ့ရှိပေမဲ့ လက်နဲ့စမ်းကြည့်လို့ ကိုယ်ပူနေတိုင်းတော့ အဖျားမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်က အစားအသောက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု စတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး တသမတ်တည်းမဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ ညနေ ၆နာရီ ဝန်းကျင်မှာ အပူဆုံးဖြစ်တတ်ပြီး မနက် ၃နာရီ ဝန်းကျင်မှာ အအေးဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
? အပူချိန်ဘယ်လောက်ဆို ဖျားတာလို့ ခေါ်မလဲ ??
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်အပူချိန်ဖြစ်တဲ့ 36–37° C (98–100° F)အထက်ကို ကျော်သွားပြီဆို ဖျားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
? ဘာနဲ့တိုင်းလဲ ??
ဒါတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ သာမိုမီတာနဲ့ တိုင်းရပါတယ်။ ဟိုးတုန်းကတော့ လျှာအောက်ထည့်တိုင်း..ချိုင်းအောက်မှာတိုင်းတဲ့ သိပ်ကြည့်ရမလွယ်တဲ့ ပြဒါးတိုင်ဆိုတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ သာမိုမီတာတွေပေါ့။ အခုတော့ digital ဂဏန်းတွေနဲ့ ပြတဲ့ သာမိုမီတာတွေရှိလာသလို အသားကိုထိစရာမလိုတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး သာမိုမီတာတွေပါ ရှိနေပါပြီ။
ချိုင်းမှာတိုင်းရင်တော့ ပကတိအပူချိန်ထက် နည်းတာမို့ 0.2 – 0.3 ° C ထပ်ပေါင်းပြီးတွက်ရပါတယ်။
? ဘာကြောင့်ဖျားတတ်လဲ ??
များသောအားဖြင့်တော့ Virus ၊ Bacteria ၊ Fungi ၊ Protozoa စတဲ့ ရောဂါပိုးပေါင်းစုံထဲက တစ်ခုခု.. လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုကနေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အလည်အပတ်ရောက်လာပြီဆို ကိုယ်ပူတက်ပြီး ဖျားလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ဖျားတတ်ပါသေးတယ်။
တချို့ဆေးတွေကြောင့်လည်း ကိုယ်ပူချိန်တက်လာတတ်သလို Amphetamine လို စိတ်ကြွဆေးတွေကြောင့်လည်း ကိုယ်ပူတတ်ပါတယ်။ အရက်ဖြတ်တဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်ပူတက်နေတတ်ပါတယ်။
ဖျားနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်း မြောက်များစွာရှိသလို ဘာကြောင့်ဆိုတာ လုံးဝအကြောင်းရင်းရှာမရတဲ့ Pyrexia of Unknown Origin (PUO) ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ကို ကျီစယ်စိန်ခေါ်ပြီး လူနာကို အကြာကြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့ ရောဂါအခြေအနေမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
? ဖျားရင် ဘာလက္ခဏာတွေ ပြတတ်လဲ ??
ကိုယ်ပူပါမယ်။ တချို့ ရောဂါတွေမှာ ချမ်း/တုန် နေတတ်ပါတယ်။ အဖျားစတက်တဲ့ အချိန်နဲ့ ဘယ်လိုဖျားတယ်ဆိုတာကို သေချာသတိပြု မှတ်ထားပြီး ဆရာဝန်ကိုပြောဖို့လိုပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဖျားတဲ့ပုံစံချင်းကွာတတ်ပါတယ်။
အူရောင်ငန်းဖျားလို Relative Bradycardia လို့ခေါ်တဲ့ ရှားရှားပါးပါး နှလုံးခုန်နှေးနေစေတတ်တဲ့ ရောဂါမျိုးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အဖျားတွေမှာ နှလုံးခုန်မြန်တတ်ပါတယ်။
ကိုက်ခဲ..ညောင်းညာ..မလှုပ်ချင် ဖြစ်တတ်သလို..ခေါင်းကိုက်နေတတ်ပါတယ်။ အစားအသောက်လည်းပျက်တတ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးလို အခြေအနေမျိုးမှာ နှာစေး..ချောင်းဆိုး..ဝမ်းလျှော..စတာတွေ တွဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို ထိခိုက်တယ်ဆိုတာမူတည်ပြီး တခြားလက္ခဏာတွေပြနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေရယ် ဘာတွေခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဒနာတွေရယ်ကို ကြည့်ပြီးမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေး..လိုအပ်ရင် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေတွေ…ဓာတ်မှန်အဖြေတွေအကူအညီနဲ့ ရောဂါအဖြေထုတ်ကုသရတာမို့ ဆရာဝန်ကို အားလုံး မခြွင်းမချန် ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ချစ်စရာစရိုက်တွေထဲက အားနာတတ်တဲ့ ဓလေ့က ဆေးရုံဆေးခန်းတွေဆီကို ပါလာတဲ့အခါ ဖြစ်သမျှ အားလုံးတခါတည်းမပြောဘဲ နောက်တစ်ခါပြမှ ခွဲပြော တတ်တဲ့ လူနာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးတာမို့ပါ။
? ဖျားတာ ဘာကောင်းလဲ ??
ဘာမှမကောင်းဘူးလို့တော့ မပြောပါနဲ့ဦး။ တကယ်တော့ ကိုယ်ပူနေတာ ဖျားနေတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ တိုက်ပွဲရဲ့ စစ်ချီတေးသံတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရရာလက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Immune System ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သက်စောင့်တပ်သားလေးတွေရဲ့ အောင်ပွဲအပူရှိန်ကို ဗွေမယူသင့်ပါဘူး။
ရောဂါပိုးတွေဝင်လာတာကသာ မကောင်းလို့ ကာကွယ်ဖို့လိုတာပါ။
? ဒါဆို ရောဂါပိုးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ??
– ကာကွယ်ဆေးတွေအားလုံး မပျက်မကွက်ထိုးပါ
– အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အကာအကွယ်မဲ့တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုတွေကိုရှောင်ပါ
– မကြာခဏ လက်ဆေးပါ
– အစာအာဟာရ ပြည့်ဝမျှတစွာစားပါ
– လူထူထပ်တဲ့ နေရာတွေရှောင်ပါ
? ဖျားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??
ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်လို့ ကိုယ်နည်းနည်းပူနေရုံနဲ့တော့ ဆေးတွေသောက်ဖို့ မလိုသေးပါဘူး။ ?ကိုယ်ပူတာအပြင် ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေ၊ ခေါင်းကိုက် အကြောတက်တာတွေ၊ ညောင်းညာတာတွေဖြစ်လာရင်တော့ Paracetamol(ပါရာစီတမောလ်) ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ သောက်ထားလို့ရပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ အဖျားအနာတော့ လွင့်သွားမှာပါ။ လိုတာထက်တော့ ပိုမသောက်ပါနဲ့။
– ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ကွမ်း ရှောင်ဖို့
– အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ဖို့
ရေများများသောက်ပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆိုရင်တော့ စောစောစီးစီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်..။
အားလုံး အဖျားအနာ ကင်းကြပါစေ..။